Hofọdụ nseta ihuenyo site na FSX
Hofọdụ nseta ihuenyo site na FSX 3 afọ 2 ọnwa gara aga #584
Nke a bụ ụfọdụ nseta ihuenyo m mere FSX. Atụ anya na-amasị gị.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203, aussieflyer38, yasshe
Hofọdụ nseta ihuenyo site na FSX 3 afọ 2 ọnwa gara aga #585
Wee ochie akwụkwọ ndị ọzọ ụbọchị, were anyị 707-320 maka a di na nwunye flights.
Ọ dị mwute na mgbe on ụkwụ 3 m ghọtara, m ga-enwe ike ịrụcha si njem dị ka m na-agaghị na-ezuru ụgbọ elu awa ekpe na airframe na ga-etinye ya n'ime mmezi mgbe ụkwụ 3.
The ọdụ flash dịghị mgbe e ji na a 707 (ha naanị nwere ya na a 737, 757, na 767), kama m na na kama ụtọ nke ya otú ahụ ka m na-etinye ya ọnụ Photoshop na nwere ya na a ole na ole repaints m na mere . (Kpọmkwem ahụ m na-emeghị. Odomo, ma na-enwe nsogbu na ya, otú ahụ ka m chọpụtara na nke a otu online n'ihi na ugbu a)
Ụkwụ 1: KDAL - PMDY
Ụkwụ 2: PMDY - WMKP (eserese e na obibia WMKP)
Ụkwụ 3: WMKP - FAOR
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: aussieflyer38
Hofọdụ nseta ihuenyo site na FSX 2 afọ 8 ọnwa gara aga #800
Ezi ụbọchị Gh0st ,,, whats up buddies ,, ị ka na-efe efe gị AA airliners ụzọ?
Napụrụ maka oghere okpomọkụ ,,, dobe site na-ekwu ezigbo ...
Na-atụ anya gị nke ọma na ihe niile dị mma n'akụkụ gị nke ụwa ,,,
Oge ike page: 0.477 sekọnd